Soosaarida Warshada Shiinaha Isothiazolinones / Methylisothiazolinone CMIT / MIT 14% CAS 26172-55-4 / 2682-20-4 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Sahayda warshad Isothiazolinones / Methylisothiazolinone CMIT / MIT 14% CAS 26172-55-4 / 2682-20-4
Mashiinka u hoggaansamaya, qalabka dhismaha, birta korontada ku shaqeysa, injineernimada kiimikada duurka, maqaar, rinjiyeynta rinjiga iyo daabacaadda wareejinaysa si loo dheehdo, maalinta loo rogo, jeermiska waxyaalaha la isku qurxiyo, dekedda, macaamilka biyaha iwm.
Warshad siisa tayo sare CMIT / MIT-14 CAS 26172-55-4 / 2682-20-4
Magaca badeecada: CMIT / MIT-14
CMIT / MIT-14 waa sheyga isku dhafan ee 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one /
CAS Maya.: CAS 26172-55-4 / 2682-20-4
1. Maaddaama ay tahay nooc ballaaran, oo muddo dheer bakteeriyada disha si ay u disho bakteeriya badan, fungi iyo khamiir, inta la isticmaalayaa way yar tahay.
2. Ku habboon in loo isticmaalo dhexdhexaadka qiimaha pH ee u dhexeeya 2 illaa 9; ka madax bannaan cusbo kala-duwan, iskutallaab isku xidhnow no emulsion.
3. Biyo lagu lumi karo; waxaa lagu dari karaa talaabo kasta oo wax soo saar ah; fududahay in la isticmaalo.
4. Waxay leedahay sun hooseeya iyo isku-uruurinta habboon ee isticmaalka, taas oo u horseedi doonin waxyeello gebi ahaanba.
Adeegsiga iyo taxaddarrada
1. Codsiyada daaweynta biyaha, ku milmi 1.5% xal biyo ah marka hore. Ku dar xalka tiro ah 80 ilaa 100 ppm loogu talagalay hal ama laba jeer toddobaad kasta iyadoo kuxiran isku dhufashada jeermisyada sida bakteeriyada iyo algae.
2. Ka fogow taabashada tooska ah ee indhaha muddo dheer. Mar alla markii xiriirku dhaco, indhaha biyo ku mayr dib u dhac la'aan. Lama ogola taabashada muddada dheer ee maqaarka.
3. Xiriir kasta oo lala sameeyo biraha dib loo dhigi karo waa mamnuuc inta lagu guda jiro keydinta, tusaale ahaan, birta iyo aluminium, si looga fogaado in ay u daato.
4. Kuma haboona in loo isticmaalo qalabka alkaline-ka ee pH> 9.0 sababtoo ah deganaanshihiisa oo liidata. Isku-darka kasta ee kiimikadan kiimikooyinka nukliyeerka ee aadka u sarreeya, sida S2- iyo R-NH2, waxay u horseedi doonaan hoos u dhac tayo ama xitaa dhammaystirnaan buuxda ee alaabta.
1. 250 Kg halkii durbaan ee IBC ama 250kg halkii durbaan
Kaydinta iyo Transportation
In lagu keydiyo heerkulka qolka meel mugdi ah; leh waqti shelf hal sano ah
Jaale ama huruud-cagaaran dareere hufan
Mawduuca Maandooriyaha Firfircoon (%)
Cufnaanta (g / ml)
Hore: daaweynta biyaha BCDMH (Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione) CAS 32718-18-6
Xiga: Warshad siisa tayo sare Isothiazolinones / 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one CAS 26172-55-4
Factory dalab fasalka sare Amorphous Hoose Bo ...
Tayo sare leh polyetylen glycol monomethallyl ...
Hexamine / Urotropine oo heer sare ah oo sicir wanaagsan ...
Budada qiimaha wanaagsan Fluanisone 99% cas 1480-19-9
warshad dhexdhexaad Farmashiyaha heer sare ah ...
Qiimo wanaagsan UV Nuugista UV 928 CAS 73936-91-1